Sida loo caddeeyo oo loo horumariyo Social Media ROI ( Tools Free ) | BehMaster
Bogga ugu weyn/Warbaahinta bulshada/Sida loo caddeeyo oo loo hagaajiyo ROI warbaahinta bulshada (Aalado bilaash ah)
Sida loo caddeeyo oo loo hagaajiyo ROI warbaahinta bulshada (Aalado bilaash ah)
Suuqgeeyaha bulshada ahaan, waxaad horeyba u fahantay in warbaahinta bulshadu ay qiimo u leedahay ururkaaga. Laakiin ma qiyaasi kartaa ROI ee dadaalkaaga suuqgeynta warbaahinta bulshada? Bulshada ROI waxay badanaa noqon kartaa mid adag in la caddeeyo.
Cilmi-baarista LinkedIn waxay ogaatay in 58 boqolkiiba suuqgeyniyeyaasha dhijitaalka ah ay tahay inay caddeeyaan warbaahinta bulshada ROI si ay u helaan oggolaanshaha codsiyada miisaaniyadda mustaqbalka. Si kastaba ha ahaatee, kaliya 37% ayaa "aad ugu kalsoonaa" cabbirkooda ROI.
Cabbiraadda warbaahinta bulshada ROI waxay sidoo kale fure u tahay dhisidda iyo hagaajinta istiraatiijiyadda suuqgeynta bulshada. Waxa ay ku tusinaysaa waxa shaqaynaya iyo waxa aan ahayn — taas oo kuu ogolaanaysa in aad beddesho agabka iyo tabaha si aad waxtar badan u yeelato.
Maqaalkan waxaan ku siin doonaa talooyinka iyo qalabka (oo ay ku jiraan xisaabiyaha ROI ee bilaashka ah) aad u baahan tahay inaad caddeyso oo loo hagaajiyo bulshada ROI.
Bonus: Soo deji hage bilaash ah iyo liis hubin si ay kaaga caawiyaan in aad ku qanciso madaxaaga in uu wax badan ku maalgeliyo warbaahinta bulshada. Waxaa ku jira talooyinka khabiirada ee caddaynta ROI.
Baraha bulshada qeexida ROI
ROI waxay u taagan tahay "ku soo noqoshada maalgashiga." warbaahinta bulshada ROI waxay u taagan tahay soo celinta maalgashiga hawlahaaga warbaahinta bulshada.
Guud ahaan, warbaahinta bulshada ROI waa cabbir dhammaan ficillada warbaahinta bulshada ee abuura qiime, oo loo qaybiyo maalgelinta aad samaysay si aad u gaarto falalkaas. Ka bacdi waqtiga, lacagta, iyo agabka la geliyo — maxaa soo noqon kara?
Halkan waxaa ah qaacido fudud oo loogu talagalay sida loo xisaabiyo ROI ee warbaahinta bulshada:
Qiimaha / maalgashiga (saacadaha dadka, miisaaniyada xayeysiiska, iwm.) X 100 = warbaahinta bulshada ROI (sida boqolkiiba)
Sida loo cabbiro warbaahinta bulshada ROI ee ganacsiga
Sida saxda ah ee aad u xisaabiso ROI waxay ku xidhan tahay ujeedooyinka ururkaaga (ka warqabka sumadda, dakhliga, ku qanacsanaanta macaamiisha, iwm.).
Taasi waa sababta qaacidada sare ay u isticmaasho qiimaha, halkii ay ka ahaan lahayd dakhliga ama faa'iidada, barta bilawga ah.
Tusaale ahaan, Johnsonville Sausages waxay leedahay barnaamij dhegeysi bulsho oo ballaaran. Waxay adeegsadaan bulshada si ay fikrado uga helaan noocyada badeecadaha cusub ee ay tahay inay horumariyaan.
Halkii ay isticmaali lahaayeen xisaabinta maaliyadeed, waxay ku saleeyaan ROI dadaalkooda dhegeysiga bulsheed ee ku saabsan inta macluumaadka ay awoodaan inay la wadaagaan kooxda horumarinta alaabta. Qiimuhu wuxuu ku jiraa sirdoonka la ururiyay, halkii uu ka ahaan lahaa iibka ama dakhliga.
Waan ka mahadcelinaynaa codkaaga….. la wadaaga tan iyada oo ay la socdaan kooxahayada wax soo saarka. 👍👍
- Johnsonville (@Johnsonville) Luulyo 5, 2020
Waa kan sida loo cabbiro warbaahinta bulshada ROI ee ganacsigaaga.
Tallaabada 1: Qeex ujeedooyinka warbaahinta bulshada ee cad
Tani waa meesha aad ku qeexdo qiimaha, marka la eego natiijooyinka warbaahinta bulshada, macnaheedu waa astaantaada.
Marka loo eego Altimeter, kaliya 28 boqolkiiba ururadu waxay dareemayaan inay u nisbayn karaan qiimaha natiijooyinka ganacsi ee ay wadaan warbaahinta bulshada. Ujeedooyinka warbaahinta bulshada ee cad waxay kaa caawinayaan inaad qeexdo sida ficilada bulshadu ula jaan qaadaan yoolalka ganacsiga iyo waaxda.
Ka fakar siyaabo kala duwan maalgashigaaga warbaahinta bulshada ayaa u abuuri kara qiimo, sida
Beddelka ganacsiga (sida iibsashada macmiilka ama jiilka rasaasta)
Aqoonta astaanta ama garashada
Khibrada macmiilka iyo daacadnimada
Amniga iyo yaraynta khatarta
Hubi inaad tixgaliso dhammaan dhagaystayaasha bulsheed ujeedooyinkaaga. La yaab maaha in sahanka Altimeter uu helay macaamiisha iyo bulshada summada leh inay yihiin daawadayaasha ugu muhiimsan ee warbaahinta bulshada. Laakiin shaqaalaha, alaab-qeybiyeyaasha iyo la-hawlgalayaasha, iyo saamilayda ayaa dhammaantood loo aqoonsaday dhegaystayaal muhiim ah, sidoo kale.
Qoraal uu wadaagay Hootsuite (@hootsuite)
Haddii aadan ka fikirin dhammaan dhageystayaashaada bulsheed, waxaa kaa maqan qiimaha markaad xisaabinayso ROI-gaaga.
Tallaabada 2: Deji yoolal caqli badan
Markaad dejiso ujeedooyin cad oo isku xidha ROI-gaaga warbaahinta bulshada natiijooyinka ganacsiga dhabta ah, waxaad u baahan tahay inaad dejiso yoolal. Waa maxay farqiga u dhexeeya?
Ujeedooyinka ayaa qeexaya meesha aad rabto inaad aado. Hadafka ayaa qeexaya sida iyo goorta aad halkaas tagi doonto.
Waa kuwan dhowr tusaale oo fudud:
Waxaan kugula talineynaa inaad isticmaasho qaabka dejinta yoolka SMART. Hadafka kasta waa inuu ahaado:
Lagu gaari karo
Waqti ku habboon
Tusaale ahaan, haddii aad rabto inaad horumariso adeegga macaamiisha ee warbaahinta bulshada, samee nambar iyo waqti kama dambays ah. Marka, tusaale ahaan: "Waxaan ku dadajin doonnaa waqtiga jawaabta ugu horreysa 10 daqiiqo dhammaadka sanadka."
Haddii ujeeddadaadu tahay inaad kobciso beddelaad, hadafka wanaagsan wuxuu noqon karaa tiro gaar ah oo horseed ah oo aad rabto inaad ku dhex waddo bulsho ahaan rubucii. Ama, waxaa laga yaabaa inay kordhiso beddelka bogga soo degista 10 boqolkiiba dhammaadka sanadka.
Si kastaba ha ahaatee hadafku, hubi inaad cabbirto waxqabadkii hore si aad u dejiso bartilmaameedyo. Kadibna deji yoolalka hagaajinta. Si cad u qeex inta uu le'eg yahay qiimaha hadaf kastaa u keenayo astaantaada.
Talaabada 3: Raad raac cabirka waxqabadka saxda ah
Waxaad u baahan tahay inaad la socoto cabbirrada warbaahinta bulshada si aad u go'aamiso haddii aad gaadhayso ujeedooyinka iyo inaad gaadhayso yoolalkaaga.
Waxa loogu yeero cabbirrada "wax aan waxba tarayn" - sida kuwa jecel, faallooyinka, iyo saamiyada - waxay helayaan rap xun, laakiin waxay yeelan karaan qiimo. U isticmaal si aad u qiyaasto caafimaadka guud ee joogitaankaaga bulsheed, ku cabir naftaada tartamayaasha, oo aad go'aamiso waxa ku jira ee la falcelinaya dhagaystayaashaada.
Kaliya waa in loo tixgeliyo cabbirrada "wax aan waxba tarayn" haddii aysan la socon ujeedooyinka ganacsigaaga.
Qiyaasaha kale ee aad la socon karto si aad u caddeyso ROI waxaa ka mid ah:
Ka qayb qaadashada dhagaystayaasha
Ledhka ayaa la soo saaray
Is-diiwaangelinta iyo beddelka
Dakhliga la soo saaray
Markaad go'aansanayso cabbirrada aad isticmaalayso, is waydii:
Waa maxay noocyada waxyaabaha ay sameeyaan dadka la beegsanayo ka dib la kulanka ololaha?
Halbeeggani ma waafaqsan yahay ujeeddooyinkayga?
Miyay iga caawisaa inaan go'aan gaadho (waxa la sameeyo in ka badan, waxa ka yar, iwm)?
Ma leeyahay awood aan ku cabbiro si wax ku ool ah?
Si joogto ah u hubi cabbirkaaga. Waxaad heli kartaa warbixino laguugu soo diro sanduuqaaga maalmaha gaarka ah ee usbuuca si aadan u xasuusan inaad laftaadu soo jiidato.
Laakin hubi inaad cabbirto soo-celintaada muddada kugu habboon iyadoo lagu saleynayo wareeggaaga iibka. Cilmi-baarista LinkedIn waxay ogaatay in 77% suuqgeyniyeyaasha dhijitaalka ah ay cabbireen natiijooyinka bishii ugu horreysay ee ololaha, xitaa marka ay ogaadeen in wareeggooda iibku yahay saddex bilood ama ka badan.
Si kastaba ha ahaatee, Oracle Data Cloud waxay ogaatay in kaliya 47% qiimaha ololaha la xaqiijiyay afarta toddobaad ee ugu horreeya.
Haddii aad xisaabiso suuq-geyntaaga warbaahinta bulshada ROI goor hore ololaha, waxa aad wayday qiimaha dambe ee imanaya. Ha iska iibin naftaada gaaban!
Talaabada 4: Xisaabi inta aad ku kharash garayso baraha bulshada
Waxaad u baahan tahay inaad fahanto maalgelintaada buuxda ee warbaahinta bulshada si aad u go'aamiso inaad soo laabasho fiican helayso. Waxaa jira dhowr waxyaalood oo muhiim ah oo aad u baahan tahay inaad ku darto:
Qiimaha agabka iyo aaladaha
Inta badan shabakadaha bulshada waa u xor in la isticmaalo, laakiin miyaad bixisaa nooca qaaliga ah ee masraxa maamulka warbaahinta bulshada?
Miisaaniyad loo qoondeeyay kharashaadka xayeysiiska bulshada
Tani waa waxa ugu fudud ee lagu raadraaco, maadaama kharash kasta oo la xoojiyey boostada Facebook ama xayaysiisyada Instgram lagu diiwaan galiyo dashboardka xayeysiiska ee goobta.
Intee in le'eg ayay ku kacday soo saarista agabyada aad la wadaagtay bulshada intii lagu jiray olole gaar ah? Ma lahayd qorayaal gudaha ah ama kuwa iskood u shaqeysta ayaa sameeyay qoraallo blog? Intee ayuu qoraagu sameeyaa saacad? Immisa saacadood ayay qaadatay in la soo saaro boostada blog? Ku dar wakhtiga tifaftirayaashaada iyo istiraatijiyada macluumaadka, sidoo kale.
Waqtiga ay ku bixiyeen kooxdaada warbaahinta bulshada
Laga soo bilaabo shirarka, dhajinta iyo kor u qaadida macluumaadka, ilaa socodsiinta xayeysiisyada - ku dar dhammaan. Waxaad tan u samayn kartaa wakhti cayiman si aad u go'aamiso ROI ee ololaha, ama xisaabiso inta wakhtiga ganacsigaagu ku bixiyo baraha bulshada bil kasta ama sannad kasta. Ha iloobin inaad ku darto tababarka.
Wakaaladaha iyo la taliyayaasha
Haddii aad isticmaasho, ku dar kharashkooda xisaabintaada. Isticmaal qaybta ku habboon ee khidmaddooda ololaha ama muddada.
Tallaabada 5: Samee warbixinta ROI
Kaliya 60% ganacsatada dhijitaalka ah ayaa si firfircoon ula wadaaga natiijooyinkooda warbaahinta bulshada ee ROI, marka loo eego cilmi baarista LinkedIn. Taas macnaheedu waa 40% ma sameeyaan.
Marka ay timaado cabbirada ROI kaaga, had iyo jeer way fiicantahay in la wadaago. Baro sida suuqgeynayaasha dhijitaalka ah ay aad ugu furfuran karaan warbixintooda. https://t.co/aqC3X2RlSu pic.twitter.com/ls3dNdobpO
- Suuqgeynta LinkedIn (@LinkedInMktg) Noofambar 22, 2019
Laakin ka warbixinta ROI-gaaga ayaa qiimo dhab ah u leh kooxdaada iyo miisaaniyadaada.
Ka bilow inaad ku soo noqoto qaacidada ROI ee aan ku wadaagnay goor hore ee qoraalkan. Waxa kale oo aanu helnay qalab dhamaadka qoraalkan kaa caawin doona inaad la socoto oo xisaabiso ROI.
Waa kuwan qaar ka mid ah talooyin ku saabsan abuurista war-bixin bulsho oo weyn oo ROI ah.
Hababka falanqaynta ayaa kuu oggolaanaya inaad la socoto cabbirada adoon samaynin warbixinno gaar ah olole kasta.
Isticmaal luqad cad
Qof kastaa ma fahmo xogta warbaahinta bulshada iyo sidoo kale adiga. Markaa, waa muhiim in macluumaadka loo soo bandhigo sida ugu cad ee suurtogalka ah.
Kala hadal ujeedooyinka ganacsi ee khuseeya
Taasi waa sababta aad u qeexday bilowgii habkan.
Aad bay u dhib badan tahay in maamulahaagu uu maqlo: "Hadafkeena waa inaan kordhino dakhliga dhuumaha 10 boqolkiiba waana kan sida warbaahinta bulshadu uga qayb qaadato taas," marka loo eego in la maqlo: "Waa kan inta saami ee qoraalladayada Facebook ay heleen bishan. ”
Si cad u sheeg waxa aad awooddo - oo aanad samayn karin - marka ay timaaddo cabbirka ROI. Ku muuji waxa suurtogalka ah xogta aad hayso, laakiin caddee waxa aan suurtogal ahayn in la cabbiro sidoo kale.
Ha iloobin inaad si sax ah u dejiso waxyaabaha laga filayo muddada: ma muujin kartid qiimaha wareegga iibka saddex bilood ka dib hal bil oo olole ah.
Sida ROI looga helo baraha bulshada
Cabbiraadda ROI ee bulshada waxay ku saabsan tahay qiil u samaynta falalkii hore. Laakin, mar labaad, waxa ay sidoo kale kaa caawin kartaa in aad horumariso istiraatijiyadaada hore u socoshada.
Halkan waxaa ah dhowr tabo oo degdeg ah iyo agab lagu hagaajinayo ROI.
1. Tijaabi oo hagaaji
Ma waxaad wadaa xayeysiis bulsho? Ku tijaabi qaybaha dhagaystayaal kala duwan iyo qaabab xayaysiis.
Waxaa jira waxyaabo aan la tirin karin oo aad dib u habeyn karto si aad u aragto kuwa keena natiijooyinka ugu fiican, sida aan ku qeexnay hagahayaga baaritaanka A/B. Markaad ka warbixinayso suuq-geynta warbaahinta bulshada ee ROI, caddee waxaad baraneyso iyo sida ay casharadaas u saameeyaan qiimaha iyo soo laabashada.
Tusaale ahaan, markii ay samafal: biyuhu bilaabeen isticmaalka xayaysiisyada Facebook, kuma ay dhicin yoolalka dakhliga ROI isla markiiba fiidmeerta. Dhab ahaantii, waxay qaadatay ku dhawaad ​​hal sano. Laakiin sanadkaas dhexdiisa, waxay si joogto ah u heleen qiimo markay barteen waxa u shaqeeyay oo aan u shaqayn ururkooda.
"Xaqiiqdii waxaan aragnay xayaysiisyo yaryar oo shaqeynayay sanadka oo dhan," ayay tiri Amy Zhang, maareeyaha sare ee abuurista baahida. "Waxaan sii wadnay inaan tijaabino wax kasta oo aan awoodno - dhegeystayaasha, nuqulka xayeysiiska, fariimaha, sawirada, fiidiyowyada, xayeysiiska carousel, iwm - ilaa aan ka gaarno guusha."
Dhammaadkii, waxay gaadheen soo celinta 5x kharashka xayeysiinta.
2. Isticmaal xogta si aad u tijaabiso mala-awaalka
Tani waxay sidoo kale ka ciyaareysaa isticmaalka ROI si aad u hagaajiso istiraatiijiyaddaada suuqgeyn waqti ka dib.
Tusaale ahaan, waxaa laga yaabaa inaad dareento in tweets-ka muujinaya in ka badan hal sawir oo badeecad ah ay u muuqdaan inay helaan beddelaad badan. Ama hadiyadahaas waxay u muuqdaan inay ka sarreeyaan nuxurkaaga "sida loo sameeyo".
Laakiin ma hubtaa? Ku bilow inaad si cad u habayso mala-awaalkaaga oo aad u qorto.
Marka xigta, samee awoodaha cabbiraadda xogta si aad u caddeyso in mala-awaalkaagu sax yahay iyo in kale (adigoo isticmaalaya qalabka hoose).
Haddii mala-awaalkaagu u baahan yahay xeelad cusub ama maalgashi, soo jeedi barnaamij tijaabo ah oo khatartiisu yar tahay. Hogaamiyayaasha ayaa laga yaabaa inay aad u jecel yihiin inay isku dayaan wax cusub haddii aysan ahayn inay sameeyaan maalgashi waqti dheer ah iyo ballanqaad ka hor intaysan arkin natiijooyin.
3. Ku celceli
Baraha bulshada ayaa had iyo jeer isbedelaya.
Nuxurka, xeeladaha, iyo kanaalada aad isticmaashay si aad ula xidhiidho dhagaystayaashaada maanta waxa laga yaabaa inaanay berri taaba noqon.
Waxaad u baahan tahay inaad cusbooneysiiso oo aad la qabsato istaraatiijiyadaada waqti ka dib. Baahida macmiilka iyo dhibcaha xanuunka miyay isbedelayaan? Meheraddaadu miyay badashay mudnaanta ama agabka? Waa maxay aaladaha cusub iyo tignoolajiyada bedelaya habka ay dhagaystayaashaadu u isticmaalayaan warbaahinta bulshada?
Dhammaan arrimahan ayaa saameyn doona sida aad ku kasbato soo-celinta wanaagsan ee maalgashigaaga warbaahinta bulshada.
Xusuusnow in si fudud ururinta macluumaadkan lafteedu ay qiimo u leedahay ururkaaga.
4. Xusuusnow sawirka weyn
Haku mashquulin inaad raacdo ROI-ga gaaban oo aad lumiso aragtida waxa ka dhigaya astaantaada mid qiimo leh oo gaar ah.
"Ma samayno wax soo laabashada muddo gaaban oo kaliya," ayuu yiri Marc Verschueren, maamulaha suuqgeynta iyo iibinta internetka ee Happy Socks. "Wax walba waa inay ahaadaan calaamad, haddii kale waxay dhaawici doontaa calaamadda muddada dheer."
Qoraalada summada sharabaadada isla markiiba waa la aqoonsan karaa, oo dhammaantood maaha wax ku saabsan samaynta iibka degdegga ah.
Boqolkiiba XNUMX ka mid ah jawaab-bixiyeyaasha sahanka Altimeter ee aan horay u soo sheegnay ayaa sheegay in baraha bulshada ay hagaajiyeen caafimaadka astaanta. Taasi waa isha dhabta ah ee qiimaha.
Qalabka ROI ee warbaahinta bulshada
Hadda oo aad ogtahay aragtida ka dambeysa cabbiraadda ROI bulshada, halkan waxaa ah qalabyada qaar si loo fududeeyo habka.
Xisaabiyaha ROI ee bulshada
Waxaan u dhisnay qalabkan bilaashka ah si uu kaaga caawiyo xisaabinta soo celinta maalgashigaaga warbaahinta bulshada. Waxaad u isticmaali kartaa inaad ku cabbirto ROI olole lacag bixin ah ama mid dabiici ah.
Kaliya geli lambaradaada oo xisaabiyaha ayaa kuu qabanaya xisaabta oo dhan, isaga oo ku siinaya ROI boqolkiiba ahaan.
Qalabkan bilaashka ah ee wax ku oolka leh ee Google ka yimid waa qasab si loola socdo taraafikada website-ka, beddelka, iyo saxiixitaanka ololayaasha warbaahinta bulshada.
Waxay kuu ogolaanaysaa inaad ka gudubto ficilada hal mar ah oo aad la socoto qiimaha ololahaaga bulsheed waqti ka dib adoo abuuraya oo la socda mashiin beddelka.
Ku dar summadan qoraalka gaaban URL si aad ula socoto xogta muhiimka ah ee ku saabsan booqdayaasha mareegaha iyo ilaha taraafikada.
Marka lagu daro barnaamijyada falanqaynta, xuduudaha UTM waxay ku siinayaan sawir faahfaahsan oo ku saabsan guushaada warbaahinta bulshada, laga soo bilaabo heer sare (shabakadaha sida ugu wanaagsan u shaqeynaya) ilaa tafaasiisha guud (taas oo boostada u kaxeysa taraafikada ugu badan bog gaar ah).
Waxaad ku dari kartaa cabbirrada UTM isku-xiryadaada gacanta (fiiri casharradayada) ama adigoo isticmaalaya goobaha isku xidhka ee Hootsuite.
Tani waa qayb ka mid ah koodka degelkaaga kaas oo kuu ogolaanaya inaad la socoto beddelka xayeysiisyada Facebook-ka keenaya iibka. Habkaas waxaad ku arki kartaa qiimaha buuxa ee xayeysiis kasta oo Facebook ah uu abuuro, halkii aad kaliya riixi lahayd ama iibin lahayd isla markiiba.
Baro wax badan oo ku saabsan pixel-ka Facebook hagahayaga faahfaahsan.
Saamaynta Hootsuite waxay kaa caawinaysaa inaad cabbirto ROI warbaahinta bulshada dhammaan kanaalada la bixiyay, la iska leeyahay, iyo kuwa la kasbaday.
Saamayntu waxay ku xidhaa hababkaaga falanqaynta ee jira si aad u dhexgeli karto xogta bulshada iyo inta kale ee cabbirka ganacsigaaga. Waxay ka dhigaysa soo saarista warbixinnada mid fudud, waxayna ku siinaysaa talooyinka luqadda cad si ay u horumariso istiraatijiyaddaada bulsho.
Hootsuite Insights waxaa xoojiya Brandwatch
Qalabkani wuxuu kaa caawinayaa inaad aqoonsato wada sheekaysiga iyo isbeddelada warshadahaaga, iyo sidoo kale gaadhista, dareenka astaanta, iyo in ka badan. Waxaa taageeray 100 milyan oo ilo xog ah, natiijooyinka waqtiga-dhabta ah, iyo is-dhexgal si fudud loo isticmaali karo.
Qodobadan xogta ayaa kaa caawin kara inaad cabbirto ROI ujeedooyinka ganacsi ee la xidhiidha caafimaadka sumadda.
Adeegso Saamaynta Hootsuite oo hel warbixinnada luqadda cad ee xogtaada bulshada si aad u aragto dhab ahaan waxa u horseedaya natiijooyinka ganacsigaaga-iyo halka aad ku kordhin karto ROI-gaaga warbaahinta bulshada.
Ku cadee oo ku hagaaji ROI bulsho leh Saamaynta Hootsuite. Lasoco beddelka, sheekaysiga, iyo waxqabadka dhammaan kanaalada.
Webinar bilaash ah: Hagaha Maya Bulsh*t ee Hantidhawrka Warbaahinta Bulshada
Fiidiyowga: Drew Madore oo ku saabsan sida "koofiyadda madow SEO" uu isbeddelay sannadihii la soo dhaafay
Sida Si guul leh loola macaamilo Taageerada Tiknoolajiyada (5 Tallaabo oo Fudud)